Atụrụ atụrụ na ndị na-eweta Mittens na Factory - China Ndị na-emepụta atụrụ na ndị na-emepụta Mittens
Napa akpacha ajị ajị atụrụ lambskin mittens
Mittens a bụ oge oyi zuru oke, aka na-ekpo ọkụ na ụbọchị kachasị oyi. Akpacha ajị atụrụ & Napa Akpụkpọ anụ. durable napa akpụkpọ anụ na-emecha ajị anụ ajị anụ na-adị ọcha. Emere site na 100% merino akpụkpọ anụ, otu n'ime ụwa kachasị mma ajị ajị atụrụ. Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ dị nro na ọkụ, na-eju anya ma na-adịgide adịgide, dị mma maka ijegharị oge oyi ma ọ bụ mgbede mgbede na-anọ n'èzí. Nkeji edemede mba: LM-010C ool Ajị anụ ogologo bụ banyere 6-10mm .. ● Agba: nwa, brow ...
kpochapụwo 100% ezigbo suede shearling ajị atụrụ mittens na n'ime onuete
Ihe mkpuchi a nke ejiri aka ya mee, ihe nkedo dị iche iche, nwere ike ịpịgharị ma ọ bụ gbadaa iji gbanwee ụdị uwe ahụ. ejiri akwa kacha mma eji mara nma. siri na ọkụ, n'ụzọ dị ịtụnanya ma sie ike n'ụzọ siri ike, na-adịgide adịgide mana akwara ndị sitere n'okike na-eme ka mittens nwee ume. Ezigbo maka ijide aka na-ekpo ọkụ n'oge oyi. Nkeji edemede no: LM-011C ool Wool length is about 6-10mm .. ...
A na-eji akpa akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ ụkwụ na aka
Oge gboo na nkecha. Kere ya na stitch, ụzọ ọdịnala nke ejiri aka. Mechie ya site na stitch. Karịsịa, enwere ike ịpịgharị ma ọ bụ gbadaa iji gbanwee ụdị nke mittens.E mere site na ọdịdị nke ajị atụrụ, nke siri ike na ọkụ, na-eju anya ma na-agbasi ike. inogide ma na eke emep uta eri eme ka mittens ume. Ọ dị mma maka ijide aka na-ekpo ọkụ n'oge oyi. Nkeji edemede no: LM-009C ool Ajị anụ ogologo bụ banyere 6-10mm .. ● Agba: nwa, aja aja na ndị ọzọ na agba ● E nwere anọ si ...
100% ezigbo suede mittens
Ihe kachasị mma dị mma, ejiri ezigbo akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ mee. ọdịdị nke akpụkpọ anụ atụrụ, siri ike na ọkụ, n'ụzọ na-ekpo ọkụ ma sie ike n'ụzọ siri ike. inogide ma na eke emep uta eri eme ka mittens ume. Ezigbo maka ijide aka na-ekpo ọkụ n'oge oyi. Nkeji edemede no: LM-008C ool Ajị anụ ogologo bụ ihe dị ka 6-10mm .. ● Agba: oji, aja aja na agba ndị ọzọ ● Enwere nha anọ. S / M 7, M / L 8 maka ụmụ nwanyị. S / M 9, M / L 10 maka ụmụ nwoke. ● MOQ: 100 ụzọ abụọ
Iesmụ nwanyị na-azụ atụrụ atụrụ oge ochie
Mere si luxuriously adụ mmadụ abụọ ihu ịkwa osisi, ha na-dụkọta site na iji omenala usoro. dị oke ọkụ ma na-adịgide adịgide ma ọ bụ ezie na eriri anụ ahụ na-eme ka ogwe aka na-eku ume. Zuru oke maka ịnụ ụtọ ama ama gị na ihu igwe oyi yana ama ama maka ịkwọ ụgbọala, yana akwa maka akwa paty n'oge oyi.
Mkpịsị aka Merino ajị atụrụ na nke ejiri aka maka ụmụ nwanyị
Styledị ejiji, ọ bụ oge gboo na okomoko, nke emere site na 100% merino, nke kachasị mma ajị ajị ajị anụ. Ejiri akwa kwesịrị ekwesị nwere ike ịgbanye ka ọ bụrụ ihe ejiji mkpụcha ejiji, nwekwara ike ịda n'ala. Ọ dabere na gị. Ndị aka ọrụ aka nwere ihe karịrị afọ 10 nyere aka., Nke na-eme ka ogwe aka ọ bụla dị mma na nkasi obi. Ọ bụ chioce kachasị mma maka idobe ọkụ n'oge oyi.
Iesmụ nwanyị nwere ezigbo akpụkpọ anụ atụrụ na ajị anụ
Emere site na 100% ezigbo lambskin nke merino, wichih dị oke ọkụ ma na-adịgide adịgide mana eriri anụ ahụ na-eme ka uwe ndị a nwee ume. na ajị anụ dị nro ma na-agbanwe agbanwe. na-eme dị ka thermostat nke anụ ahụ. Ọ e mere na nwa na isi awọ, isi awọ ajị si ewepụtụ azụ egwuregwu nwa nkwụ, Enwetaghị gị anya n'otu ntabi anya. Enwere ike ịkpọrepu ma ọ bụ ala. Atụmatụ abụọ ahụ dị irè ma mara mma.
Iesmụ nwanyị ejiri aka na-eme akwa atụrụ dum na ụta Njirimara
Mere nke naanị merino sheepskin, The kacha na ladies okomoko uwe mara mma e mere na deere., Featuring a ụta zuru ezu, ụta na-mere nke merion atụrụ, ọ bụ ajị ihu. . ejiri aka ya dum mee ihe, mee ka ihe sie ike ma sie ike.
Iesmụ nwanyị ejiri aka na-eme akwa atụrụ zuru ezu na njiri mara Njirimara
Mere nke naanị merino sheepskin, The kacha na ladies okomoko uwe mara mma e mere na deere., Featuring a nkechi nkowa, ọ bụghị naanị ibu adụ na ala ha na-ukwuu mara mma na nkecha. dabara adaba, sie ike ma sie ike. O zuru oke maka ejiji ihu igwe oyi.
Iesmụ nwanyị ejiri aka eji ajị ajị atụrụ nile ji aka ha emee nke ọma
Ihe eji achọ mma ma mekwaa., Nke ejiri akpịrị ajị atụrụ. Nke na-adighi mma maka akwa ejiji ihu igwe.
Ldies Ezi suede Lambskin uwe na-egosipụta na ihuenyo mmetụ aka
Emere ya nke ọma ma jiri aka ya mee ya. Mere ya na merino sheepskin. Otu ahịrị nke ajị ọcha si na tirmiri na-acha ọcha apịaji cuff. Lee ịdị ọcha na nke kachasị mma. Ọ bụghị naanị na ị ga-ejide wram maka aka gị, hapụkwa ka ịnụ ụtọ swipe ama gị na oge oyi.